နေမကောင်းလို့ ဆေးသွင်းနေရတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် – ရှအေလငျး
အိန္ဒြာကျော်ဇင်တစ်ယောက် Night Scene တွေ ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးနေရပြီး အလုပ်တွေ ပင်ပန်းနေတာကြောင့် ဆေးသွင်းနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က “လရဲ့အောက်ဘက်ကမိုင်အဝေးမှာ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ရိုက်ကူးနေတာပါ။
အိန္ဒြာကျော်ဇင်ဟာ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေရင်း နေမကောင်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။ Night Scene တွေ ဆက်တိုက်ရိုက်ရပြီး အိပ်ရေးတွေ ပျက်နေတာကြောင့် ဆရာဝန်ခေါ်ပြီး ဆေးသွင်းနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ နေမကောင်းတဲ့ ကြားထဲကပဲ လက်ရှိရိုက်ကူးနေတဲ့ ဇာတ်ကားအတွက် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားလို့ နေပါတယ်။
‘ရိုက်နေတဲ့ကားမြန်မြန်ပြီးပါစေလို့ ဆုတောင်းရုံမှတစ်ပါး အခြားမရှိ ဆေးသွင်းပြီးရိုက်ရတဲ့အဖြစ် ဒီညလဲညလုံးပေါက်မနက်၆နာရီအထိတဲ့. ဆရာဝန်က အိပ်ရေးမဝလို့မရဘူးတဲ့, အိပ်ရေးပျက်မခံပါနဲ့တဲ့….ဆရာပြောတာနဲ့ ခုလုပ်နေရတာနဲ့ ကွက်တိပါပဲလားကွယ်။ဆေးသွင်းပြီးနဲနဲလန်းသွားတာနဲ့ မိတ်ကပ်ထလိမ်းပြီး ခု ရှုတင်ထွက်.” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ မတ်လ(၄) ရက်နေ့က ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ဖို့အတွက် ပြောထားသလို အားပေးစကားလေးတွေလည်း ပြောထားကြပါတယ်။အိန္ဒြာကျော်ဇင် ဟာ လက်ရှိမှာ ဒါရိုက်တာ ထူးပိုင်ဇော်ဦး ရိုက်ကူးနေတဲ့ “လရဲ့အောက်ဘက်မိုင်အဝေးမှာ” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ရိုက်ကူးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဇာတ်ကားကို သူမနဲ့အတူ ဒေါင်း၊ ရဲထွဋ်၊ ဝင်းခန့်မိုး၊ တို့အပြင် အခြားသော အနုပညာရှင်များနဲ့ ပုံဖော်ရိုက်ကူးလျက်ရှိပါတယ်။
အိန္ဒြာကျော်ဇင်ဟာ ၁၉၉၆ တစ်ခုနှစ်ထဲမှာပဲ MISS KOKKINE & MISS CHRISTMAS ၂ဆုလုံး ရထားတဲ့ Miss ၁ ဦးဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။အိန္ဒြာကျော်ဇင်ဟာ အနုပညာလောကထဲမှာ အောင်မြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်နေနိုင်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ “မျက်နှာများတဲ့မိုးကောင်းကင်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၊ ၂၀၁၇ မှာ”ရင်ဘက်ထဲကဓား ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ အကယ်ဒမီဆုတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အိန်ဒွာကြျောဇငျတဈယောကျ Night Scene တှေ ဆကျတိုကျရိုကျကူးနရေပွီး အလုပျတှေ ပငျပနျးနတောကွောငျ့ ဆေးသှငျးနရေတယျလို့ သိရပါတယျ။ အိန်ဒွာကြျောဇငျက “လရဲ့အောကျဘကျကမိုငျအဝေးမှာ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကို ရိုကျကူးနတောပါ။
‘ရိုကျနတေဲ့ကားမွနျမွနျပွီးပါစလေို့ ဆုတောငျးရုံမှတဈပါး အခွားမရှိ ဆေးသှငျးပွီးရိုကျရတဲ့အဖွဈ ဒီညလဲညလုံးပေါကျမနကျ၆နာရီအထိတဲ့. ဆရာဝနျက အိပျရေးမဝလို့မရဘူးတဲ့, အိပျရေးပကျြမခံပါနဲ့တဲ့….ဆရာပွောတာနဲ့ ခုလုပျနရေတာနဲ့ ကှကျတိပါပဲလားကှယျ။ဆေးသှငျးပွီးနဲနဲလနျးသှားတာနဲ့ မိတျကပျထလိမျးပွီး ခု ရှုတငျထှကျ.” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျမှာ မတျလ(၄) ရကျနကေ့ ရေးသားထားတာတှရေ့ပါတယျ။
သူမရဲ့ ပရိသတျတှကေလညျး ကနျြးမာရေး ဂရုစိုကျဖို့အတှကျ ပွောထားသလို အားပေးစကားလေးတှလေညျး ပွောထားကွပါတယျ။အိန်ဒွာကြျောဇငျ ဟာ လကျရှိမှာ ဒါရိုကျတာ ထူးပိုငျဇျောဦး ရိုကျကူးနတေဲ့ “လရဲ့အောကျဘကျမိုငျအဝေးမှာ” ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကို ရိုကျကူးနတော ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီဇာတျကားကို သူမနဲ့အတူ ဒေါငျး၊ ရဲထှဋျ၊ ဝငျးခနျ့မိုး၊ တို့အပွငျ အခွားသော အနုပညာရှငျမြားနဲ့ ပုံဖျောရိုကျကူးလကျြရှိပါတယျ။
အိန်ဒွာကြျောဇငျဟာ ၁၉၉၆ တဈခုနှဈထဲမှာပဲ MISS KOKKINE & MISS CHRISTMAS ၂ဆုလုံး ရထားတဲ့ Miss ၁ ဦးဖွဈခဲ့ဖူးပါတယျ။အိန်ဒွာကြျောဇငျဟာ အနုပညာလောကထဲမှာ အောငျမွငျတဲ့ သရုပျဆောငျတဈဦးအဖွဈ ခိုငျမာစှာ ရပျတညျနနေိုငျသူ တဈဦးဖွဈပွီး ၂၀၀၄ ခုနှဈမှာ “မကျြနှာမြားတဲ့မိုးကောငျးကငျ” ရုပျရှငျဇာတျကား၊ ၂၀၁၇ မှာ”ရငျဘကျထဲကဓား ” ရုပျရှငျဇာတျကားနဲ့ အကယျဒမီဆုတှေ ပိုငျဆိုငျထားသူတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။
အာရှတစ်ခုလုံးကို ခြိမ်းခြောက်လာနိုင်သည့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှ ပြန့်ပွားလာနေသော ဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ
စနိုက်​​ကြော်​မ​တွေကို တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်ခွက်​နဲ့ ပညာသားပါပါ...